Xaaladda magaalada Muqdisho kadib bandowgii ay shalay ku dhawaaqeen maamulka gobolka Banaadir – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Xaaladda magaalada Muqdisho kadib bandowgii ay shalay ku dhawaaqeen maamulka gobolka Banaadir
Wararka saakay naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in xaaladda guud ee magaalada ay maanta tahay mid aad u degan, iyadoona wadooyinka ugu muhiimsan ee magaalada ay yihiin kuwa furan oo ay dadka si caadi ah u isticmaalayaan.
Wadooyinka Muqdisho ayaa saakay waxaa lagu arkayaa gaadiidka iyo dadweynaha oo si caadi ah u isticmaalaya, xilli maalintii shalay mas’uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir ay ku dhawaaqeen in wadooyinka waaweyn la xiri doonno maalmaha Talaadada iyo Arbacada.
Mas’uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir ayaa xirnaanshiyaha wadooyinka Muqdisho ku macneeyay inay tahay, si aysan qal-qal amni darro ugu imaan, xilliga ay dhaceeyso xafladda caleemo saarka madaxweyne Farmaajo oo lagu wado inay dhacdo maalinta Arbacada ah.
Ciidamo badan ayaa saakay lagu arkayaa wadooyinka qaarkood, kuwaasi oo ammaanka magaalada adkeynaya.
Dhinaca kale, xafladda caleemo saarka madaxweynaha ayaa la filayaa in maalinta berito ah ay si habsami leh uga dhacdo magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, waxaana xafladaasi kasoo qeyb gali doonna madax kala duwan.
Ugu dambeyntii, waxaa sidoo kale maalinta berri hakad la gelin doonnaa dhamaan duulimaadyadii garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, marka laga reebo wufuuda caalamiga ah ee imaanaysa dalka, kuwaas oo lagu wado inay xafladda ka qeyb-galaan, sida ay horay u shaacisay dowladda federaalka Soomaaliya.